October 10, 2020 10567
ब्राजि’लका एक दम्प’त्तिले पछिल्लो २० वर्षदेखि लगातार छोरीको आशा गरेर बसेका छन् । यही आशाले उनीहरुलाई १३ छोराहरुको आमा–बुवा बनाएको छ । । यी दम्पत्ती’का सबै छो’राहरु १ महिनादेखि १८ वर्ष उमेर समूहका छन् ।
यो परिवार ब्राजि’लको कानसिका’ओको कोटी इला’कामा बस्ने गर्दछन् । ठूलो परिवारलाई खाना बनाउन निकै मेहनत गर्नुपर्ने जूसिसिलेडी बताउँछिन् । उनका अनुसा एक’पटकमा उनले एक कि’लो चामल, एक किलो गेडागुडी र ठूलो प्याकेट म्या’क्रोनी बनाउने गर्दछिन् ।
Prevयी सुन्दर युवतीहरुको यस्तो अचम्मको माछा मार्ने तरिका (हेर्नु`होस् भिडियो सहित)
Nextनेपालमा आज हालसम्मकै बढी संक्रमित फेला, कति संक्रमित थपिए ? हेर्नुहोस्
कादर खानले अमिताभ लाई मृ’त्युको अन्तिम स्वाससम्म पर्खिरहे , आखिर किन ? थाहा पाउनुहोस्